Nagu saabsan - Kingtone Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Kingtone Packing waa shirkad hormuud u ah soo-saarista muraayadaha qaddarinta iyo khaaska u ah cuntada iyo cabitaanka, warshadaha daryeelka shakhsi ahaaneed. Xuzhou Kingtone Glass Products Co., Ltd waa waaxda ganacsiga caalamiga ee Dahua. Waxaan la aasaasay 1985 iyo in ka badan 20 sano waayo-aragnimo wax soo saarka. Waxaan leenahay khibrad wax soo saar xirfadeed oo fara badan waxaanan ku qalabeynay teknolojiyad adag iyo qalab wax soo saar oo casri ah. Waxaan si joogto ah u soo saarnaa badeecooyin iyadoo la raacayo heerka gobolka wax soo saarkeenana ay caan ku yihiin Shiinaha tayo sare. Waxaan si guul leh u gudubnay ISO9001: 2000 Certification.Our macaamiisheennu waa dhammaan adduunka oo dhan, in ka badan 100 waddan.
Anagawaxaa la aasaasay sanadkii 1985 waxayna leeyihiin khibrad wax soo saar in ka badan 20 sano ah. Waxaan leenahay khibrad wax soo saar xirfadeed oo fara badan waxaanan ku qalabeynay teknolojiyad adag iyo qalab wax soo saar oo casri ah.
“Tayada sare, sicirka macquulka ah & adeega iibka kadib” waa mabda’aheena, “Qancsanaanta Macaamiisha” waa hadafkeena weligeed ah; Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa looga aqoonsaday suuqyo badan oo ku yaal guriga iyo adduunka oo dhan.
Waxaan ku leenahay sumcad wanaagsan bixinta farsamada gacanta iyo adeeg tayo leh. Isla mar ahaantaana, waxaan wali ku sii haynaa qiimaha heer tartan u ah iibsadayaasha si ay ugu helaan fursado badan iyo faa'iido suuqa.
Dad Hibo leh
Macaamiisha Farxada Leh
Waxaan haynaa wax ka badan 20 + sano oo khibrad warshadeed ah
Gaar ahaan, Xuzhou Jintong waxay bixisaa dhalooyin quraarado ah iyo qalab kala duwan (koofiyado lagu rido, bambooyin lagu buufiyo, koofiyado wareegsan, ulaha sonkorta, koofiyadaha iyo koofiyadaha). Waxaan leenahay ku dhowaad 20 sano oo waayo-aragnimo ah warshadaha baakadaha waxaanna ku siin karnaa tayo sare leh oo casri ah alaabooyinka wax lagu duubo ee loogu talagalay quruxda adduunka iyo noocyada daryeelka maqaarka.
Dhammaan xarumaheena wax soo saar ee horumarsan waxay la kulmaan heerarka Mareykanka oo waa shahaado FDA, sidaa darteed waxaan la kulmi karnaa baahiyaha macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, shirkaddu sidoo kale waxay leedahay daabacaadda shaashadda, rinjiyeynta, gargaarka, tiknoolajiyada elektaroonigga ah, si loo daboolo baahiyaha macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha ee loo habeeyay.Waxaan haysannaa in ka badan 60,000 cag laba jibbaaran oo bakhaarro ah oo aan ku kaydinno wax ka badan 20 milyan oo alaab ah si loo hubiyo qanacsanaanta macaamiisha isla markiiba. iyo ilaali waqtiyada dhalmada oo gaagaaban.